मधुमेहलाई जरैदेखि हटाउने सजिलो उपाय र आर्युवेदिक औषधी – Khabarhouse
Khabar house | ६ भाद्र २०७८, आईतवार ११:१६ | Comments
काठमाडौं : हरेक नेपालीको घरमा कोहि न कोहि मधुमेहका रोगी हुन सक्छन् । मधुमेहलाई नेपाली समाजमा ‘खान दानी रोग’ भनिन्छ । खानदानी यस अर्थमा कि,सुख-सयाल वा ऐश आरमपूर्ण जीवन विताउनेहरु यस रोगको सिकार हुने गर्छन् । मिठो मसिनो खाने, आरमपूर्वक बस्ने, निस्त्रिय रहनेहरुलाई मधुमेहको जोखिम हुन्छ ।
त्यसैले मूलत मधुमेह जीवनशैलीसँग सम्बन्धित समस्या हो । बद्लिदो जीवन शैली, तनाव र गलत खानपानको कारण मधुमेहको रोगी बढ्दो छ । हुन त मधुमेहबाट छुटकारा पाउनका लागि एलोपेथिक औषधी एवं उपचार विधी छ । त्यस्ता उपचार र औषधीले मधु मेह नियन्त्रण त हुन्छ, निर्मूल भने हुँदैन । जबकी आर्युवेदिक औषधी एवं प्राकृतिक विधी अपनाएर मधुमेहबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
मधुमेहलाई जरैदेखि हटाउने घरेलु विधी मधुमेह जीवनशैलीसँग सम्बन्धित समस्या भएकाले यसको निदान पनि सोहि अनुसार खोज्नु पर्छ । खासगरी स्वस्थ्य खानपान, सक्रिय दिनचर्यासँगै नराम्रो आनीबानी हटाउनु पर्छ । यसका साथै अन्य केहि घरेलु विधी छन्, जो निकै प्रभावकारी हुन सक्छ ।
१. तीनदेखि चार हरियो प्याज जरैसँग लिने । त्यसलाई राम्ररी धुने । अब उक्त प्याजलाई दुई लिटर पानीमा भिजाएर रातभर राख्ने । बिहान पानी पिउने। यो पानी एकै पटक पिउनु हुँदैन । दिनभरमा जतिबेला तिर्खा लाग्छ, थोरै थोरै पिउनुपर्छ । १ महिना निरन्तर यो विधी अपनाउनुपर्छ, मधुमेह नियन्त्रण हुन्छ ।
२. अमला, करेला, नीम, मेथी दाना र घिउमुकारीले मधुमेह नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्छ। करेलामा भिटामिन ए, बि-१, बि- २, सि हुन्छ। यी पोषक तत्वले रगतमा सुगर र पिसाबको सुगर कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले हरेक दिन एक गिलास करेलाको जुस पिउनैपर्छ ।
योग : मधुमेहलाई जरैबाट हटाउनका लागि योग पनि एकदमै प्रभावकारी हुन्छ । बाबा रामदेवका अनुसार प्रतिदिन १५ देखि २० मिनेटसम्म कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम-विलोम, मन्डुकासन गर्नुपर्छ, मधुमेह नियन्त्रण हुन्छ ।